ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကြီးမြတ်တဲ့ Kiss ၏လျှို့ဝှက်ချက်
နမ်းပျော်ရွှင်စရာနှင့်တဲ့အခါညာဘက်ပြုဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တွေဝေမီးပွားပျံလာလိမ့်မည်, သင်သည်ချန်ထားမည်. သို့သော်မည်သို့သင်သည်နောက်တစ်နေ့အဆင့်သင့်အနမ်းယူကြပါ? အောက်တွင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးသည်ကြီးမြတ်သောနမ်းခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသကြပါပြီ.
Secret ကို #1: ကျီစား
နှုတ်ခမ်းကိုသော့ခတ်မီ tease ဖို့အချိန်ပေးအမျှော်လင့်တည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်. ဒါကြောင့်လက်ကိုကိုင်ပြီးင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, caressing, သို့မဟုတ်ကျောက်ကုန်းပွတ်တိုက်, အမှန်တကယ်နမ်းမီဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့သင့် connection နက်ရှိုင်းနှင့်အတူ shared ကိလေသာကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
Secret ကို #2: သက်တောင့်သက်သာနေပါ
နမ်း, သင်ကအဆတရာကိုနမ်းခဲ့ကြလျှင်ပင်, အတော်လေးအာရုံကြောတစ်ပွဲဖြစ်နိုင်. key ကိုဖြေလျော့ရန်ဖြစ်သည်. နက်ရှိုင်းသောရှူရှိုက်မိဖို့သတိရပါ, သင့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြေလျှော့, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်.
Secret ကို #3: နှုတ်ခမ်းကို
နမ်းထက်အခြားသင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းနှင့်အကျင့်တို့ကိုကျင့်. နို့စို့သို့မဟုတ်ညင်သာစွာသင့်မိတ်ဖက်သောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည် nibbling လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်အတူအရူးသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်. နောက်ထပ် Lip-အာရုံစူးစိုက် technique ကိုသူတို့နှုတ်ခမ်းကျော်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သင်၏လျှာ၏အစွန်အဖျားကို run ဖို့ဖြစ်တယ်. သင့်ရဲ့အနမ်းကိုကောက်ဘူးကြသောအခါ, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်လာမည့်ကြွလာတော်မူသည်အရာကိုသိမည်မဟုတ်သကဲ့သို့အနမ်းပွင်ရဲ့ဖိအားနဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းအမျိုးမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်.
Secret ကို #4: နားကို, နှာခေါင်း, မျက်စိကို, နှင့်လည်ပင်း
နမ်းပုံမှန်အားဖြင့်သင်တို့အပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်သင့်ပါသည်တစ်ခုတည်းသောနေရာမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်ကိုအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ. သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်များနားကိုနမ်း, စစ်ဆေးခြင်း, နှာခေါင်း, မျက်ခမ်းနှင့်အားလုံးရင်ခုန်စရာချမ်းသာသို့သာမန်နမ်းလှည့်ရန်ကူညီ. သင်ကထစ်ကထပေးဖို့လိုပါလျှင်, သူတို့ရဲ့ earlobe နှင့်လည်ပင်းကိုက်ရွှတ်ကြိုးစား. အဲဒီအထူးသဖြင့်အစက်အပြောက်သင့်သည်ရောက်ရှိလာတော့မည့်နမ်း၏စိတ်ဇောနှင့်ပြင်းထန်မှုထည့်သွင်းမည်ကိုသစ်ကိုအာရုံနဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖန်တီး Teasing.
Secret ကို #5: Emotion
အထက်ပါလျှို့ဝှက်ချက်ကိုကြီးစွာသော kisser သို့မည်သူမဆိုလှည့်ကိုကူညီနိုင်နေစဉ်, သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ဖို့သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်နှင့် ဆက်စပ်. အားလုံးမုသာကိုအကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်. နမ်းနေစဉ်အတွင်းမီးရှူးမီးပန်းကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်, သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအချင်းချင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်. ရင်းနှီးသောပုံပြင်များနှင့်အမှတ်တရများဝေမျှပေးခြင်းဖြင့်, စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးမား, နှင့်သင့်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြသတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းသည့်အဆင့်မှသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုယူဖို့အားလုံးကိုနည်းလမ်း. အခုအသစ်နေစဉ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်သင်အန္တရာယ်ကျရောက်စေပါလိမ့်မယ်, ဒီကတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်လို့တစ်စွန့်စားမှုဖြစ်.
နမ်းသူတို့သည်သင့်အားဆိုလို့မည်မျှသင့်အထူးတစ်စုံတစ်ယောက်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအံ့သြစရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်အတူ, ဒီရင်းနှီးသောလုပ်ရပ်သင်ချင်သောနက်ရှိုင်းသော connection ကိုသို့သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်.